तीज, व्रत र वैदिक मान्यता – Sadarline
१८ भाद्र २०७३, शनिबार १२:२१
हिन्दु महिलाहरुको लागि मौलिक पर्व तीजको रमझम आजभोलि बाटोमा श्रृगांर गरेर महिना दिन अघि देखि शहर बजारमा र टेलिभिजनमा शुरु हुन्छ । खेतीपाती सिद्धाएपछि माइतीमा तीज मान्न हिडेका मैतालु देख्न पाइन्थ्यो । आजभोलि एनजीयो संस्कृतिको कुसंस्कारले होला महिना दिन अघिबाट होटल र पार्टी प्यालेस पो भएछन् तीजको दर खाने ठाउँ । गाउँघरका चेली माइतीमा पुगेर मीठो मसिनो बनाइ वरिपरिका जम्मा भएर आनन्दपुर्वक तीजको दर खाने चलन थियो । शहरका नवधनाढ्यका लागि महिना दिन अघिबाट फेसन प्रदर्शन गर्ने र घरको सट्टा होटल र पार्टी प्यालेस मदिरा सहितको दरखाने स्थलको रुपमा फेरिएको देख्दा कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाँउमा भन्ने उखान चरितार्थ भएको र तीजको मौलिकता नै हराएको जस्तो लाग्न थाल्यो ।
टेलिभिजनमा महिना दिनभन्दा अगाडीबाट तीजका गीत भनेर दोहरी गीतमा महिला र पुरुष नाचेको देख्दा र सुन्दा कानै पाक्न थालेको छ । महिलाहरु जम्मा भएर सुखदुखका अनुभव भावनाहरु तीजका गीत मार्फत पोख्ने तीज पर्व थियो । आजभोलि तीज गीत भनेर उत्ताउला र दोहरी गीतलाई जवर्जस्ती तीजगीतका नाममा प्रसारण भएको देख्दा संस्कृित प्रेमी हृदय मर्माहत भएको छ । हाम्रा आगामी पिढीलाई केहीँ वर्ष पछि सायद तीज पर्व महिना दिन अगाडिबाट फेशन शो गर्ने र होटलमा पार्टी खाने अनि उत्ताउला गीतमा नाच्ने नै हो भन्ने लाग्ला र तीजको मौलिकता नै हराउने छ । यस्तो उछृङखलतालाई बढावा दिन सामाजीक संस्थाहरु, राजनीतिक पार्टीहरु र धर्मपरिवर्तनकारिहरु सक्रियरुपमा लागेको देखिन्छ । धर्म्निरपेक्षका पक्षधर राजनीतिक पार्टिहरु दर ख्वाउने पार्टी दिन तँछाड मछाड गरेको देख्दा अनावश्यक र भड्किलो खर्चिलो तामझाम गरेर के सन्देश दिन खोजेका हुन् ? कि शालीन पर्वलाई मदिरा सहितको पार्टी बनाई सँस्कृितलाई मेटन् त उद्यत छैनन यी बजियाहरु ?
तीज वा हरितालिका भाद्रपद शुक्ल तृतीयाको दिन प्राय निर्जल (पानी नपिएर) केवल महिलाहरुद्वारा राखिने सौभाग्य व्रतको रुपमा आजभोलि प्रचलित छ । पुराण अनुसार — ‘हरित’ ( अपहरित ) ‘अलियो’ (संगीनीहरु) द्वारा लुकाइएर कन्दरामा यो व्रतको पालन गरिएको हँुदा, यसैले यसको नाम ‘हरितालिका’ भनेर प्रसिद्ध भयो । अघिल्लो रात दर खाएर भजन कृतन, तीजका गीतहरु गाएर जागरण गरी तीजको दिनमा पानी नपिएर साँझमा शिवगौरीको पुजा गरी व्रतको पालन गरिन्छ । तीजको अघिल्लो रातमा महिलाहरु साँझको खाना पछाडी पनि दर खाने भनेर भोजन गर्ने चलन यो पर्वमा मात्र पाइन्छ । महिलाहरुद्वारा आफनो पति प्िरत शुभकामनाहरु र दीर्घ जीवनको लागि अनि अविवाहितहरु राम्रो वर पाउने प्रार्थना गर्दछन् । तर अन्धविश्वासका नाममा कहीँ कहीँ दिनभर पिसाव समेत नफेरेर शरिरलाई कठोर सजाय पनि दिन्छन भनेर सुन्न पाइयो, यस्तो कृया प्रति हाम्रा धर्म गुरुहरुबाट मार्ग दर्शन र अन्धविश्वास फैलन नदिन गतिलो पाइला चाल्नै पर्दछ ।
पत्रपत्रिकामा केहि बुझक्की महिलाहरुद्वारा तीजमा शिवलिङ्गको पुजा गर्नु अनैतिक हो भन्ने अभिप्रायका लेखहरु पढन पाइयो । उहाँहरुको आरोपको आधार विदेशी विद्वानहरुले अंतरविरोधहरुले भरिएको ‘देव’ बुझ्न कठिनाई भएको र पुरुष जननाङ्गको रुपमा लिएको पाइन्छ । यसलाई नै आधार बनाएर अन्य धर्मावलम्वीहरुले हिन्दुहरुलाई खिसी टिउरी गरेको पाईन्छ । पुरातत्वका विद्वानहरुको भनाइ अनुशार लिङ्गपुजा(ढुङ्गा) ईसा पुर्व आकार र विधिमा भिन्नताकासाथ पुरै संसारभरीका मुर्तीपुजकहरुमा लिङ्ग (ढुङ्गा) पुजा प्रचलनमा थियो । इजिप्ट, ग्रिस, इटाली, फ्रान्स, अमेरिका, अफ्रिका, एसियामा शिवलिङ्ग (मुर्ती) पुजा हुन्थ्यो । बाइबलमा बर्णन गरिएको इजरायलमा रहेको बेथल (ढुङ्गा ) जसलाई अरबीहरुले ‘बेतएलमुकद्दस’ भन्दछन् । मक्काको मसजिदमा रहेको ‘सँगअसवद’ ढुङ्गा शिवलिङ्गकै आकारकोलाई मुस्लिमहरुले चुम्दछन् । अमेरिकाको हवाइ टापुमा रहेको शिवलिङ्गकै आकारको ढुङ्गालाई स्थानिय धर्ममान्नेहरुले प्रार्थना गर्दछन् ।
हठयोग गर्नेहरु दियोको ज्योति (दिपशिखा) मा ध्यान लगाउँदछन् । हावामा ज्योति धपधप गर्दा स्थिर ध्यान गर्ने प्रकृयामा अवरोध उत्पन्न गर्दछ । यसकारण सिकारु हठयोगको साधना गर्नेहरुको लागी दियोको प्रतिमामा ध्यान लगाउन सजिलो होस् भनेर यस्को प्रचलन भएको पाईन्छ । यो निश्चल, स्थिर, तथा दृढज्ञान, तेजको प्रतिकका रुपमा लिइएको पाइन्छ । शिवलिङ्गलाई राम्ररि नियाल्नुहोस तलको भाग दियोको आकारको नै हुन्छ । तर मध्य युगमा वाममार्गीहरुको विकृत दिमागले यसमा जननाङ्गको कल्पना गरेर झुटो कुत्सित कथा बनाएर शिवपुराण, व्रहवैवर्त आदि पुराणको नाममा दुषित पारेको पाइन्छ । तर यस पछाडिको रहस्यबाट अनभिज्ञ सोझा हिन्दुहरुद्वारा यो प्रतिमाको पुजन पवित्रताको प्रतिकको रुपमा गर्दछन् ।
वैदिक मान्यतामा उपवास—व्रतको अर्थ पुराणमा वर्णन गरे जस्तो स्वरुपमा छैन । उपवास दुई शब्द मिलेर बनेको छ, ‘उप’ को अर्थ हो समीप र ‘वास’ को अर्थ हो बस्नु । त्यसकारण उपवासको अर्थ हो ईश्वरको समीपमा तन्पयता पूर्वक बस्नु वा ईश्वरको ध्यानमा बस्नु हो । खाएर ध्यान साम्ररी गर्न सकिदैन भनेर भोकै बस्ने गरेको पौराणिकहरुको मान्यता छ । आज ‘उपवास’ शब्द भोकै रहनुको प्रतिक बनेको छ । पतन्जलि ऋषिले योगशास्त्रको ‘उपासना काण्ड’ मा भोकै बसेर ईश्वरको उपासनाको विधि बताएका छैनन् । ऋषिले कसरी योगद्वारा ईश्वरको ध्यान गर्ने विधि सिकाएका छन । पतन्जलि ऋषिले कहिपनि दिनभर भोकै बसेर पानी पनि नपिएर उपवास गर्न भनेका छैनन् । गर्भवती वा विवाहिता स्त्री, केटाकेटी वा वृद्ध महिला पुरुषले कहिले पनि भोकै बस्न हँुदैन । ऋषिको अनुसार अपच, अजीर्ण भएमा वा शाररिक सुद्धताको लागि सप्ताहको कुनै एक दिन जुस, सर्बत, दुध पिएर बस्दा शरीरका अंगहरुलाई आराम र सफाइको मौका मिल्दछ । आयुर्वेदका अनुसार यस्तो कृयाले शारीरिक मानसिक शक्ति बढ्दछ । तर भोकै प्यासै रहेर शरीरलाई उपवासको नाममा दुख दिनु चाँहि पाप हो । नपत्याए योगेश्वर कृष्णले गीता १७—६ “कर्शयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । मां चैवान्तः शरीरस्थं तान्विद्धयासुरनिश्चयान ।।” भन्नुहुन्छ —जो शरीरमा स्थित जीवात्मालाई कृश गराउनेहरु (शास्त्रको विरुद्ध उपवासआदि घोर आचरणद्वारा शरीरलाई सुकाउने— दुब्लाउने कष्ट दिनु नै जीवात्मालाई‘ कृश गराउनु’ हो ।) ती अज्ञानीहरुलाई आसुरी बुद्धि भएको जान ।” अब आफै विचार गर्नुहोस् योगेश्वर कृष्णले भनेको कुरालाई त मान्नुहोस् ।
व्रत सामान्यरुपमा भोकै बस्नुलाई लिइन्छ तर वैदिक सिद्धान्तमा यस शब्दको निकै ठुलो महत्व राख्दछ । व्रतको अर्थ भाकै बस्नु त हुदै होइन, यम नियम अन्तर्गत व्रत शब्दलाई लिइन्छ । व्रतको अर्थ हो ‘धार्मिक प्रतिज्ञा’ कुनै कुरा म जीवन पर्यन्त जस्तो सुकै स्थितिमा पनि अडिग रहेर निर्वाह गर्ने छु । जस्तो विवाहमा महिला र पुरुषले अग्नि, समाजलाई साक्षी मानेर धर्म ईश्वरलाई संझेर सप्तपदी व्रत ( प्रतिज्ञा) गर्दछन् कि — दाम्पत्य जीवन एकआपसमा जस्तो सुकै परिस्थितिमा सुखः दुख, बिमारी, आपद बिपदमा साथै रहने छौं र जनमभर निर्वाह गर्ने छौं । यजुर्वेद १९/३० —“व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणम । दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यती ।।” अर्थात — कुनै पनि मनुष्य विद्या, राम्रो शिक्षा र श्रद्धा बिना सत्य व्यवहार (व्रत) प्राप्त गर्न र दुष्ट ब्यवहारहरु छोड्न समर्थ हँुदैन ।
वैदिक मान्यता अनुसार हरिततालिका गृष्म ऋतुको प्रचण्ड गर्मीलाई बिदा गरेर बर्षायाम शुरु हुने पर्व हो । वर्षाले गर्मी कम गर्ने र चारै तिर खेतीपाती सकिएर हरियो वनस्पति हुनाले हरिततालिका पर्व मनाउन शुरु गरिएको हो । खेतीपाती गरेर थकित भएका नरनारीहरुले सबैतिर बालीनाली राम्रो भयो, मेहनतले राम्रो फसल हुन्छ भनी हर्षोल्लास गरिने पर्व हो । तर आजभोलि महिलाको चाडको रुपमा मनाइन थालिएको पाइन्छ । तीजको व्रतमा सबैमा इश्वरले आपसमा स्नेह फैलाउने हृदयमा प्रकाशित गरुन् र भोकै बसेर महिलाहरु बेहोस भएको खबर सुन्न नपरोस् । वैदिक ज्ञानलाई अंगालेर यस्को शुद्धरुप हरिततालिका मनाऔं ।
गएको ३१ अगस्टका दिन वाशिङ्गटनमा अमेरिकी रक्षामन्त्री एस्टन कार्टर र भारतीय रक्षा मन्त्री मनोहर पर्रिकरले रक्षा सम्वन्धी जे जस्तो सम्झौता गरेका छन् त्यसको असर र परिणाम एशियाका लागि दूरगामी हुने देखिएको छ । सम्झौतामा उल्लेख गरिए अनुसार दुबै देशहरुले आफ्ना आफ्ना रक्षा उपकरणहरुको मर्मत गर्ने, इन्धन भर्ने कामका लागि एक […]